Somaliland oo dalal deris ah ku dacweysay dowladda federaalka Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasiirka Arrimaha dibadda Somaliland, Maxamed Biixi Yoonis, ayaa sheegay inay beesha caalamka u sharaxeen, qaabka ay u burbureen wada hadaladii u dhaxeeyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland.
Wasiirku waxa uu sheegay inay safaaraddo badan iyo wakiilada wadamo badan kula kulmeen Kenya, una sheegeen inay dowladda Soomaaliya leedahay masuuliyadda burburka wadahadalkii labada dhinac.
“Safaaraddaha faraha badan ee aanu aragnay waxaanu kala hadalnay siday wax u dhaceen, waxaanu u sheegnay sababta aanu u diidnay inaanu shirka ka qayb galo, si aan war khaldan loo siin ayaanu warka saxda ah u siinay” ayuu yiri Wasiirku.
Wasiirka Khaarajigu waxa uu ku andacooday in Wadamada Caalamku uga garaabeen asbaabaha Somaliland ku diiday kulankii u dambeeyay ee wada hadalada.
“Aad iyo aad bay noogu garaabeen, waxaanu u sheegnay inaanu hore uga afeef dhiganay inaanay Somalia ku soo darin dad Somaliland ka soo jeeda shirarka labada dhinac ka socda, sidaas awgeedna aanu u diidnay, markaas dadkii Safaaraddihii badnaa ee aanu la kulanay waanu ku qancinay in waxaas aanu ku kacnay wax sax ah ahayd, waanay noo garaabeen” ayuu yiri Wasiirku.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inuu kulan la yeeshay Masuuliyiin Itoobiya ah, una sharaxeen arrintan, isagoo sheegay in Somaliland diyaar u tahay in wadamada dariska ahi xogogaal u noqdaan wada hadal kasta oo dhexmaraya Soomaaliya iyo Somaliland.
Wasiirka ayaa sheegay inay Beesha Caalamka u sheegeen inaanay Somaliland hor fadhiisan doonin dadka Somaliland ee u shaqa tagay Somalia, sida uu hadalka u dhigay, kuwaasi oo uu ku tilmaamay qaar aan metelin Somaliland iyo Somalia midna.
Wasiirka Khaarajigu waxa uu sheegay in Somaliland ahaan ay dalbanayaan in Wadamada Caalamka iyo kuwa dariska ahba arrintan soo dhex galaan oo la dhexdhexaadiyo.
“Waxaanu caalamka ka codsanay in la iskugu kaayo yimaado, in nala dhex galo oo dhexdhexaadini dhacdo, oo aanu u kala ambabaxno si wanaagsan oo walaaltinimo ah” ayuu sidoo kale yiri Biixi.
“Markaas anagu waxaanu jecel nahay in waddamadii badnaa ee hore wada hadalka uga soo qayb qaatay iyo kuwa geeska Africa soo dhex galaan arrintan, waxaanan aaminsan nahay in haddaan nala dhex galin arrimo ka xumi dhici doonaan, kolkaas waxaanu dalbanaynaa in sida ugu dhakhsaha badan Caalamku ugu arko inay muhiim tahay inaanu kala ambabaxno” ayuu yiri Wasiirku
Wada hadalkii u dambeeyay ee dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland ayaa burburay kadib markii Weftiga Somalia lagu soo daray 5 xubnood oo Somaliland ka soo jeeda balse qaarna xilal ka hayaan Somalia,qaarna hore uga soo qabteen.